नेपालमा २२ जना भेटीए यस्ता संक्रमण, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो पुष्टी – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा २२ जना भेटीए यस्ता संक्रमण, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो पुष्टी
नेपालमा २२ जना भेटीए यस्ता संक्रमण, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो पुष्टी
काठमाडौं । कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएका बिरामीमा देखिएको म्युकर माइकोसिस (कालो ढुसी) का सङ्क्रमितहरु नेपालमा अहिलेसम्म २२ जना देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.समीर अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालका विभिन्न जिल्लामा गरी २२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको बताउनुभएको छ । अहिले कुन अस्पतालमा कति छन् भन्ने यकिन भने भइनसकेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
यता त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अहिलेसम्म म्युकर माइकोसिसका १५ जना बिरामी भर्ना भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । जसमध्ये अहिले आठ जना उपचाररत छन् भने एक जनाको मृत्यु भएको र बाँकी डिस्चार्ज भएको अस्पतालका डा. राजेन्द्र प्रधानाङ्गले बताउनुभएको छ । डिस्चार्ज भएकामध्ये केहीको आँखाको शल्यक्रिया गरेर घर पठाइएको छ भने केहीको शल्यक्रिया गर्न नै नमिलेका कारण घर पठाउनुपरेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
शल्यक्रिया गरेर घर फिर्ता भएकाहरुमा पूर्णतया निको हुने सम्भावना कम नै रहेको उहाँको भनाइ छ । “यो शल्यक्रिया गरेपछि निको हुन्छ नै भन्ने हुँदैन, हामीले आँखा वरिपरि जमेको रगत सफा गरेर हेर्छौ त्यसपछि मात्र शल्यक्रिया गर्ने नगर्ने निधो गर्छौ । हामीकहाँ आएका अधिकांश बिरामीहरु धेरै जटिलता भएपछि मात्र आएको कारणले पनि शल्यक्रिया गर्न नै समस्या भैरहेको छ ” उहाँले भन्नुभयो । कालो ढुसीको सङ्क्रमण भएको शङ्का लागेपछि नै अस्पतालमा जान उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।
कालो ढुसीका बिरामीका लागि दिइने एम्फोटेरिसिन बी नामको औषधिको अहिले अभाव रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । यो औषधि कालाजारका बिरामीका लागि प्रयोग गरिँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय कालो ढुसीका बिरामीका लागि पनि प्रयोग गरिँदै आइएको थियो । एम्फोटेरिसिन बी औषधिको अभाव रहेका कारण अहिले विकल्पका रुपमा पेसाकोनाजोल औषधिको प्रयोग गरिएको डा. प्रधानाङ्गले बताउनुभयो ।
कालोढुसीको सङ्क्रमण भएकालाई प्रयोग गरिँदै आएको कालाजारको एम्फोटेरिसिन बी नामको औषधि अहिले सकिएको र मन्त्रालय यो औषधि किन्ने प्रक्रियामै रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.समीर अधिकारीले बताउनुभयो ।
दीपक मनाङेको सम्पत्ती विवरण : २० वटा भैंसी र ५ वटा गाई भएको फार्म, अनि ६ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण